Imixholo kwiminyaka emi-3 yeGeofumadas -Geofumadas
Ikhaya/egeomates My/Imixholo kwiminyaka emi-3 yeGeofumadas
Emva kweminyaka emithathu engaphezulu kweblogi, nantsi ndishwankathela ezinye iinkcukacha eziye zangandinceda ukucwangcisa izihloko kunye nezinto eziphambili kwi-2011.
Ukuzama ukuhlala kumxholo ocingelweyo iposi yokuqala, Inani elipheleleyo leendidi lifikelele kuma-31. Njengomgca jikelele, kwisithuba sika-2007, ndaphakamisa iindidi ezi-4: iCartography, i-AutoCAD, iMicrostation kunye neGeospatial.
Igrafu yayo yokusabalalisa ndisebenzisa ishadi (Excel 2007) ye-pie kunye nefayili yesalathisi evumela ukuba ubone ukuziphatha kweepesenti ngaphantsi kwe-1%.
Ngale ndlela, kubonakala ukuba iingqungquthela zihlukaniswe ubuncinci zibe ngamacandelo amakhulu amane:
Iqela lokuqala Ingene kwi-50% yezithuba eziqulathwe kwizihloko ezisi-7 ezinamacandelo angama-9%. Oku kubonisa eyona nto iphambili kwibhlog (CAD / GeoWeb) kunye neenkqubo ezintathu endizithandayo. Kuyathakazelisa ukuba nantsi imicimbi emithathu kwemine endiyiphakamisileyo kwiposti yokuqala, ikwayimicimbi eqhuba inxenye yemivuzo: Abafowunelwa emva kohambo lwamanye amazwe.
Microstation / IBentley
AutoCAD / I-AutoDesk
Emva koko iqela lesibini inwenwela kwi-80% kwezinye izihloko ezisi-7 ezisasazwe phakathi kwe-5% kunye ne-7%, nazi ezinye iinkqubo ezimbini kunye neendlela ezivelayo ezijolise kwi-GIS, izicelo kunye nokucela ukuphononongwa. Ngesibindi esinye sezihloko ezine ezicwangciswe kwisithuba sokuqala, sinomdla kodwa izihloko ezikweli candelo zezona zihambisa eminye imbuyekezo enje ngokubonisana noqeqesho olukhethekileyo.
Nje ngeqela lesithathu kukho umgca ofikelela kuma-94% kwizihloko ezithandathu, endingakhange ndizisebenzise njengefiller okanye ezisandula kusetyenziswa njenge-gvSIG. La maxabiso ahanjiswa phakathi kwe-1% kunye ne-3%.
Kwaye ekugqibeleni kukho iqela lesine okubandakanya izihloko ezili-11, akukho namnye kubo ongaphezulu kwe-1% kwaye phakathi kwabo bonke badibanisa ukuya kulayini ovelayo we-6%. Ngelixa izihloko ezinokubakho, ndibhenele kuphela kwiminyhadala ekhethekileyo. Kukho izixhobo ezinokubakho, iApple / iMac endinethemba lokuyinyanzelisa, kwaye mhlawumbi nezo politiko ziya kukhula kuba ezi coups zibonakala ngathi ziyaqhubeka.
Yenza imali kwiBlogs
I-Apple / Mac
Kwesinye isithuba ndiza kuthetha ngokuthumela izitatisti, ukutyelelwa kunye nemali engenayo.
Ividiyo ye vavanyo ye6565